Fitarihan-tsoavaly avo lenta Fampivondronan-tsoavaly mitambatra
Fitsapana 1 - Fivoriana vita amin'ny varahina vita amin'ny indostria ary fivondronana 3 miaraka miaraka
Fitsapana 2 - Fantson-drano varahina mandrantsona
Akora: Varahina varahina 6, 8, 10, 12 mm (015/64, 05/16, 025/64, 015/32mirefy. ); matevina: 1 mm (03/64 mirefy.)
firaka: Cu-P-Ag peratra
SOSO-KEVITRA: Ny fampiasana peratra alloy dia natokana indrindra amin'ny basim-basy amin'ny tànana.
Fitaovana: DW-UHF-20kw milina fanosihosy famokarana basy
Fitsapana 1 (7-8kW)
Fitsapana 2 (6.5-9.2kW)
Coil: Regular Indonezianina fanalefahana. Ny famoronana coil Custom dia azo atao rehefa mangataka.
Vita soa aman-tsara izahay roa induction brazing fitsapana miaraka amina fivorian'ny varahina marobe. Voalohany, napetraka manodidina ny mahia amin'ny fantsom-barahina ny peratra Cu-P-Ag. Tsy nila flux fanampiny. Ampifanarahana tsara ireo fantsona avy eo. Natomboka ny dingan'ny fampidirana brazing. Raha vao ny induction brazing feno, tanteraka ireo santionany roa ao anaty rano mangatsiaka mba hamerenana avy hatrany. Ny habetsaky ny flux dia azo diovina bebe kokoa.
Sokajy Technologies Tags brazing t varahina, manakotsa-bary t, induction brushing copper, induction brazing heater, induction brazing machine, rafitra fanetren-tena, fanalan-jaza T, fanosihosena tokana T varahina, T varahina Fomba mirehitra, UHF misolelaka, Fantsona varahina UHF Post Fikarohana